I-Darkech Luxury Prestigia Apartment eMarrakech - I-Airbnb
I-Darkech Luxury Prestigia Apartment eMarrakech
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRachid
Wamkelekile eDarkech, indlu entle nebekwe kwenye yezona ndawo zikhethekileyo zaseMarrakech. Indawo yayo entle ilungile ukuba ufuna ukuphumla ngelixa uhlala kumgama wokuhamba wezinto ezintle ezinomtsalane kunye neendawo ezizodwa zomdla!
Uyilo lwangoku kunye noluhlu olutyebileyo lwezinto eziluncedo luyakwanelisa zonke iimfuno zakho.
✔ 2 amagumbi okulala
✔ Igumbi lokuhlala elivulekileyo
✔ Ikhitshi elinezixhobo
✔ I-Smart TV eneNetflix kunye ne-IPTV
✔ Iinkonzo ekuchithelwa kuzo iiholide (amadama okuqubha, igadi, indawo yokupaka)
Bona ngakumbi ngezantsi!
Yonwabela uyilo lwangoku olukhatshwa bubumnandi obuninzi kunye neenkonzo zeSmart ezikhoyo kuzo zonke iikona zale ndlu intle. Xa sasiyila eli gumbi lihle, sasebenza nzima ukunika iindwendwe zethu imvakalelo yokuba kwikhaya lesibini. Ukukhanya kwendalo okunempilo kufudumeza indawo ngexesha lasemini ngokukhanyisa iifestile ezinkulu kunye neengcango zebalcony.
Indawo yokuhlala isicwangciso esivulekileyo sidibanisa igumbi lokuhlala lokuphumla kunye nendawo yokutyela enomtsalane, ekhokelela kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, apho unokulungiselela ukutya okuphekwe ekhaya okumnandi. Indawo yonke inemigangatho eqaqambileyo eqaqambileyo, ephucula ubutofotofo be-ambience.
Thatha umhlala-phantsi kumagumbi okulala amabini atofotofo xa sele ulungele ukuphumla kwaye uphumle emva kosuku olungalibalekiyo eMarrakech.
Okokugqibela, ibhalkhoni ibonelela nge-oasis yabucala apho ungabuka khona iiNtaba ze-Atlas ezintle kunye nedama lokuqubha leresort, kunye nemingxuma yebala legalufa.
★ HLALA ★
Layita izibane ze-LED ukwenza umoya okhethekileyo. Hlala, uphumle kwaye wonwabele umboniso wakho owuthandayo weNetflix, funda incwadi kwaye uchithe ixesha ongalibalekiyo kunye nabantu obathandayo.
✔ Isofa ekhululekileyo ene-peninsula kunye neecushion
✔ Yila indawo yomlilo kwi-bioethanol
✔ Iitafile zekofu ezintle
✔ Izibane zokufunda
✔ Ukufikelela kwiBalcony
★ IKHITSHINI KUNYE NENDAWO YOKUTYELELA ★
Ilandela uyilo lwangoku lwendlu ngokunikezela ngezixhobo zasekhitshini zanamhlanje kunye neendawo eziphezulu zegranite counter. Zive ukhululekile ukulungiselela ukutya okumnandi ukuba ukhetha ukutya kwigumbi lokuhlala.
✔ Ifriji / isikhenkcisi
✔ umenzi wekofu (iipod zekofu zasimahla)
✔ Isinki - Amanzi ashushu nabandayo
✔ Iimbiza neepani
✔ Itafile yokutyela yodidi enezihlalo ezi-4
★ INDAWO YOKULALA - AMAGUMBI AMA-2 ★
Amagumbi amabini okulala abanzi kwaye akhululekile aya kukwenza uzive ngathi ulele emafini enkosi kwi-topper emnandi kumatrasi, ngelixa ubonelela ngentuthuzelo ephezulu ngenxa yeenkonzo ezongezelelweyo.
♛ Igumbi eliPhambili
✔ Ibhedi eyiKing-Size enemiqamelo, iingubo kunye namashiti
✔ I-Smart TV eneNetflix
✔ Isinxibo esineHanger yedyasi
✔ Igumbi lokuhlambela labucala elineshawa enkulu
♛ Igumbi leeNdwendwe
✔ Ibhedi elingana neQueen enemiqamelo, iingubo kunye namashiti
★ EZOKUhlambela ★
Ukongeza kwigumbi lokuhlambela labucala, eli gumbi linelinye igumbi lokuhlambela eliphumlileyo elifikelelekayo ukusuka kwindawo yokuhlala. Akukho mfuneko yakukhathazeka malunga nokupakisha izinto zangasese ezibalulekileyo njengoko zibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze ube namava akhululekile.
✔ Indlu yangasese
✔ Isixhobo esomisa iinwele
✔ Izinto ezibalulekileyo zokukhathalela umzimba
Phuma kwi-balcony yabucala ukuze ufumane umoya omtsha, utshise ilanga, uthathe umbono weentaba ze-Atlas kunye nendawo yokuphumla.
✔ Indawo yokuhlala enetafile nezitulo
Chitha iholide engalibalekiyo kule ndlu intle apho ubutofotofo bale mihla kunye nefenitshala yobunewunewu idityaniswa nobona buhle buphezulu.
Indlu yaseDarkech ikwi-Prestigia-Marrakech Golf City complex, yenye yezona ndawo zibalulekileyo kunye nezobunewunewu zaseMarrakech. Le ndawo intle kwaye inethamsanqa ifanelekile kuye nabani na ojonge iholide yokuphumla ngelixa iyimizuzu nje ukusuka eMarrakech ephithizelayo enezinto zayo ezininzi ezinomtsalane kunye neempawu zomhlaba.
Nazi ezinye iindawo ezinomdla oya kufuna ukuzindwendwela.
✔ Djemaa el Fna square (8 imiz)
✔ I-Majorelle Garden (imizuzu eyi-13)
✔ Koutoubia (imizuzu eyi-8 kude)
✔ Ibhotwe laseBahia (imizuzu eyi-10)
✔ Amangcwaba aseSaadiene (imizuzu eyi-7)
✔ El Badii-Ksibat Nhass Palace (9 imizuzu kude)
✔ Yves Saint Laurent Museum (13 imiz)
✔ Iigadi zeMenara (5 imiz)
*** Amaxesha okuhamba abalwa ukuba uhamba ngemoto
Umbuki zindwendwe ngu- Rachid
Siza kube sikhona nge-24/7 kwiindwendwe zethu nge-Whats App okanye nge-Airbnb.
Lindela impendulo ekhawulezileyo nangexesha. Sinika iindwendwe zethu indawo kodwa siyafumaneka kwisicelo ngasinye.
Njengoko sele usazi, sibonelela ngenkqubo yokungena ngaphakathi kwe-24 / 24h.
Lindela impendulo ekhawulezileyo nangexesha. Sinika iindwendwe zethu indawo kodwa siyafumaneka k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marrakesh